Catalyst & Kemikari Yekubatsira Agents Fekitori | China Catalyst & Chemical Auxiliary Agent Vagadziri, Vatengesi
Fekitori inopa 99% 5,5-dimethylhydantoin / DMH CAS 77-71-4 nemutengo wakanakisa
Zvigadzirwa zvinoenderana: BCDMH, DBDMH, DCDMH
Fekitori inopa 6-Hexanalactone / 6-Caprolactone nemutengo wakanaka CAS 502-44-3
Factory Kuwedzera Kupisa Kwekutengesa Yakakwira mhando 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone (DMI) CAS 80-73-9
Yakakwira mhando Europium trifluoromethanesulfonate CAS 52093-25-1 nemutengo wakanaka
Fekitori inopa Wilkinson catalyst Tris (triphenylphosphine) rhodium (I) chloride (11% Rh) CAS 14694-95-2
Tris (triphenylphosphine) rhodium (I) chloride CAS 14694-95-2 ndiro zita rinowanzozivikanwa re chloridotris (triphenylphosphine) rhodium (I), kuumbana kwe rhodium ine fomula [RhCl (PPh3) 3] (Ph = phenyl), inonzi zita raWilkinson.
Fekitori inopa catalyst mhangura chromite Cr2Cu2O5 CAS 12018-10-9 nemutengo wakanakisa
Mhangura chromite yakasviba, tetragonal poda iyo isingasvike mumvura. Iyo yakagadzirirwa nekudziya kusvika 400 ° C yemhangura (II) chromate (VI).
Yakachena kuchena BIS-TRIS Buffer CAS 6976-37-0 nemutengo wefekitori
Kurongedza: 1kg, 25kg bhegi / bhodhoro / dhiramu kana sekukumbira
BIS-TRIS Buffer CAS 6976-37-0, iyo zwitterionic biological buffer, inowanzo shandiswa seye buffering mumiriri mune yehupenyu uye biochemical research.
Mutengo wefekitori Hydroxyl-inogumisa polybutadiene (HTPB) CAS 69102-90-5
Hydroxyl-inogumisa polybutadiene (HTPB) iri mvura teleclaw polymer uye mhando yerubber. Inoita neketani extender, muchinjiko-unobatanidza mumiririri kana kurapa pane tembiricha yemukati kana yakanyanya tembiricha kuti iumbe iyo mitatu-mativi network sisitimu ye thermosetting polymer.
Mugadziri Tris (2-carboxyethyl) phosphine Hydrochloride / TCEP-HCL CAS 51805-45-9
Mugadziri Tris (2-carboxyethyl) phosphine Hydrochloride / TCEP-HCL
Tris (2-carboxyethyl) phosphine Hydrochloride / TCEP-HCL ine simba risinganetsi risinganetsi-isina kudzikisira mumiririri ine akawanda mashandisiro mupuroteni chemistry uye proteinomic yekutsvagisa inoenderana neyakareruka huwandu hwekudzora disulfide zvisungo. Iyo inowirirana mukomboni inogadziriswa nyore nyore uye yakagadzikana kwazvo mune aqueous mhinduro. Muchokwadi TCEP HCl yakagadzikana mune aqueous, acidic uye yakakosha mhinduro.
Factory inopa 99% 1-Methylimidazole CAS 616-47-7 nemutengo wakanaka
CAS Kwete.: 616-47-7
1-Methylimidazole inonhuhwirira heterocyclic organic komputa ine fomura CH₃C₃H₃N₂. Iyo isina mvura isina chinhu inoshandiswa seyakagadziriswa hunyanzvi, hwaro, uye sepamberi kune mamwe maoniki emvura. Iyo yakakosha senitrogen heterocycle uye seakadaro mimics kune akasiyana nucleoside mabhesi pamwe ne histidine uye histamine.
Photoinitiator 1173 mvura CAS 7473-98-5
Photoinitiator 1173 ndeye yakakwira hunyanzvi UV fotoinitiator uye ine hunhu hwehunhu hwakaderera, husingaite yero uye wakanaka kugadzikana kwemavara. Inogona kuve nyore kusanganiswa nemamwe mafotoinitiator. UV kurapa kupfeka uye inki. Bvisa zvipfeko zvehuni, mapurasitiki nesimbi, vhinhi yakawandisa.